Ny tsaho voalohany dia tafaporitsaka tao amin'ny tambajotran'ny Xiaomi Mi Note 3 | Vaovao momba ny gadget
Nivoaka ny tsaho voalohany tao amin'ny tambajotra Xiaomi Mi Note 3
Ankehitriny manana ny datin'ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny Xiaomi Mi6 izahay ary efa nisy tsipiriany maro momba izany. Anjarantsika Xiaomi Mi Note 3 mahavariana. Amin'ity tranga ity, ny zava-drehetra dia manondro fa miatrika terminal hafa tena tsara avy amin'ny orinasa sinoa isika izay mazava fa mila fanerena izy tato ho ato mba hahatratra ireo marika sisa efa natolotra ny fitaovany ankehitriny. Amin'ity tranga ity dia tsy heverinay fa havoaka tsy ho ela izy io satria matetika ny faran'ny tapany faharoa amin'ny taona, fa ny masontsivana tafaporitsaka dia tena mahaliana.
Ny tena misongadina indrindra dia ity fitaovana vaovao ity toa tsy miala amin'ny 8GB RAM, Ka miaraka amin'ny tsaho an'ny OnePlus manaraka ity Xiaomi Mi Note 3 ity, dia kandida marimaritra iraisana hafa hametraka RAM be dia be toy izany. Efa nilaza izahay tamin'ny tranga hafa fa toa tsy ilaina amin'ny RAM ankehitriny io habetsaky ny RAM io raha jerena ny rafitra fikirakirana sy ny fitantanana ny rindranasa, saingy zavatra iray raha mbola tsy mampiakatra ny vidin'ny napetraka loatra izy io, dia afaka tonga tsy ho ela.
Amin'ity tranga ity ny sisa amin'ny sioka voalaza fa manana ny fitaovana Xiaomi dia:
Fampisehoana AMOLED QHD 5,7-inch
RAM 8 GB ho an'ny kinova matanjaka indrindra ho 4 na 6GB ho an'ny kinova mahazatra
64 na 128GB fitehirizana anatiny
Batterie 4.070 mAh misy fiampangana haingana Quick Charge 4.0
Raisina an-tsaina izany ny Xiaomi Mi Note 2 dia tonga tamin'ny Oktobra tamin'ny taon-dasa Ity maodely Xiaomi vaovao ity dia azo alefa amin'ny daty mitovy ary noho izany dia ampy ny sisa ho azy. Amin'ity Xiaomi Mi Note 3 vaovao ity dia tsy misy antsipiriany manokana momba ny endriny sy ny fakantsariny, noho izany dia mila miandry isika. Azo antoka fa ho phablet mahavariana io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Nivoaka ny tsaho voalohany tao amin'ny tambajotra Xiaomi Mi Note 3
Tsy manome fanampiana ofisialy ho an'ny Windows Vista intsony i Microsoft
Nilaza i Samsung fa tsy hisy ny Bixby Voice raha tsy amin'ny faramparan'ny lohataona